महामारी - जियोफ्यूम
घर/इन्टरनेट र ब्लगहरू/पाण्डेमिया
भविष्य आज हो! हामी मध्ये धेरैले यो महामारीको परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकारका परिस्थितिहरू पार गरेर बुझेका छौं। कोही सोच्छन् वा "सामान्यता" मा फर्कने योजना पनि बनाउँछन्, जबकि अरूको लागि यो वास्तविकता जुन हामी बाँचिरहेका छौं पहिले नै नयाँ सामान्यता हो। ती सबै दृश्य वा "अदृश्य" परिवर्तनहरूको बारेमा थोरै कुरा गरौं जसले हाम्रो दिन प्रतिदिन परिवर्तन गरेको छ।
सुरु गरौं, अलिकति सम्झेर 2018 मा सबै कुरा कस्तो थियो - यद्यपि हामीसँग फरक वास्तविकताहरू छन् -। यदि मैले मेरो व्यक्तिगत अनुभव थप्न सक्छु भने, 2018 ले मलाई डिजिटल संसारमा प्रवेश गर्ने सम्भावना ल्यायो, मैले बुझेको भन्दा धेरै। टेलिवर्किङ मेरो वास्तविकता बन्यो, भेनेजुएलामा २०१९ मा हाम्रो इतिहासमा सबैभन्दा खराब देखिएको बिजुली सेवाको संकट सुरु नभएसम्म।
जब तपाईं टाढैबाट काम गरिरहनुभएको छ, प्राथमिकताहरू परिवर्तन हुन्छन्, र यो त्यही भयो जब COVID 19 दैनिक कार्यहरूमा मुख्य र निर्णायक कारक बन्यो। हामीलाई थाहा छ, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन भएको छ, तर र जीवनको लागि आवश्यक अन्य क्षेत्रहरू? शिक्षामा के भयो, उदाहरणका लागि, वा आर्थिक-उत्पादक क्षेत्रमा?
धेरैको लागि दैनिक कार्यहरू गर्न कार्यालय जानु आवश्यक थियो। अब, यो एक वास्तविक प्राविधिक क्रान्ति भएको छ, जसले उद्देश्य, योजना र परियोजनाहरू कार्यक्षेत्रमा देखा पर्न नपर्ने कार्यविधिमा परिवर्तन ल्याएको छ।
यो पहिले नै को लागी घर मा एक ठाउँ आवंटित गर्न आवश्यक छ दूरसञ्चार, र सत्य के हो भने, केही अवस्थामा यो चुनौती बनेको छ, जबकि अरूका लागि यो सपना साकार भएको छ। एक स्थिर इन्टरनेट जडान नेटवर्क, निर्बाध विद्युत सेवा, र एक राम्रो काम उपकरण जस्ता पर्याप्त प्राविधिक पूर्वाधार भएको तथ्यको साथ सुरु गर्दै, स्क्र्याच देखि हेरफेर गर्न र कसरी टेलीवर्क गर्ने भनेर बुझ्न सम्म। किनभने हो, हामी सबै प्राविधिक विकाससँग परिचित छैनौं, र हामी सबैको गुणस्तरीय सेवाहरूमा पहुँच छैन।
खातामा लिने चुनौतीहरू मध्ये एक हो, यो नयाँ युगमा नयाँ रणनीतिहरू स्थापना गर्न सरकारहरूले कसरी आफ्नो नीतिहरू समायोजन गर्नुपर्छ? र यो चौथो डिजिटल युगमा वास्तविक आर्थिक वृद्धि कसरी गर्ने? खैर, प्राविधिक पूर्वाधारमा लगानी गर्नु सरकारको दायित्व छ। यद्यपि, हामीलाई थाहा छ कि सबै देशहरूले राज्य योजनामा ​​यो योजना बनाएका छैनन्। तसर्थ, लगानी र गठबन्धनहरू अर्थतन्त्रलाई पुन: सक्रिय गर्न महत्वपूर्ण हुन सक्छन्।
त्यहाँ कम्पनीहरू, संस्थाहरू वा संगठनहरू छन् जसलाई उनीहरूको दैनिक गतिविधिहरूमा उपस्थित कार्यबल चाहिन्छ, तर सौभाग्यवश त्यहाँ अरूहरू छन् जसले टेलिवर्किङ वा टाढाको कामलाई बढावा दिएका छन्, जसले गर्दा तिनीहरूका कर्मचारीहरूमा बढी उत्पादकत्व उत्पन्न हुन्छ। किनकि तपाईंले काम गर्दा पजामामा हिड्दा सकारात्मक देख्नुपर्छ, हैन? काम सकिएसम्म कर्मचारीलाई कार्यालय समय पालना गर्न बाध्य पार्नु र अन्य प्रकारका काम वा काम गर्ने अवसरसमेत दिनु पर्ने अवस्था नरहेको उनीहरुले बुझेका छन् ।
कसै-कसैले उत्पादकतामा वृद्धिको कारणलाई आश्चर्यचकित गरेका छन्, र राम्रोसँग, पहिलो स्थानमा, घरमा भएको साधारण तथ्यले शान्तिको भावना दिन्छ। साथै चर्को अलार्ममा उठ्नु वा सार्वजनिक यातायातसँग सम्झौता गर्नुपर्दैन। कुनै पनि प्रकारको अध्ययन सुरु गर्ने वास्तविक सम्भावना छ, र काम गर्ने घण्टा बुद्धि खुवाउन बाधा होइन, र ज्ञान भन्दा मूल्यवान केहि छैन।
सिकाइ प्लेटफर्महरूको वृद्धि हिंसात्मक भएको छ, प्रशिक्षण एक व्यक्तिगत प्रतिबद्धता हो, अगाडि हुन। Udemy, Coursera, Emagister, Domestika र अन्य धेरै वेबसाइटहरूले मानिसहरूलाई दूरी शिक्षा कसरी काम गर्दछ भनेर बुझ्नको लागि सञ्झ्याल खोल्यो, र प्रयास गर्ने डर पनि गुमाए। यसले के बुझाउँछ? गुणस्तर नियन्त्रणहरू लागू गरिनु पर्छ, यी प्लेटफर्महरूमा शिक्षक र प्रशिक्षकहरूद्वारा सिकाइने सामग्रीमा नवीनता एक आधारभूत स्तम्भ हुनुपर्छ।
नयाँ भाषाहरूमा निपुण हुनु पनि व्यावसायिक विकासको लागि मुख्य बिन्दु हुनेछ, किनकि वेबमा पाइने धेरै सामग्रीहरू अंग्रेजी, पोर्तुगाली वा फ्रेन्च जस्ता भाषाहरूमा छन्। भाषा सिकाइका लागि मोबाइल एप्स र अन्य प्रकारका प्लेटफर्महरू महामारीद्वारा प्रवर्द्धन गरिएको थियो, यसको प्रयोग Rosetta स्टोन, Ablo, ओपन अंग्रेजी जस्ता दूरी पाठ्यक्रमहरू, आउने वर्षहरूमा लगातार बढ्दै जानेछन्। र, आमनेसामने कक्षाहरू मात्र प्रस्ताव गर्नेहरूका लागि, उनीहरूले एउटा भर्चुअल ठाउँको विकास गर्न थाल्नुपर्छ जहाँ उनीहरूले ज्ञान प्रदान गर्न सक्छन् र सम्बन्धित मौद्रिक क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सक्छन्।
प्रभावशाली बूम भएका अन्य प्लेटफर्महरू ती हुन् जसले रोजगारी वा छोटो कामहरू (परियोजनाहरू) प्रस्ताव गर्छन्। Freelancer.es वा Fiverr केहि प्लेटफर्महरू हुन् जसले उच्च ग्राहकहरूको ठूलो प्रवाह अनुभव गरेको छ, दुबै काम प्रस्ताव गर्न र परियोजनाको लागि उम्मेद्वारको रूपमा रोज्न। तिनीहरूसँग एक कर्मचारी छ जसले भर्तीकर्ताको रूपमा काम गर्दछ, यदि तपाइँको प्रोफाइल परियोजनाको लागि उपयुक्त छ भने उनीहरूले तपाइँलाई यो प्रस्ताव गर्न सक्छन्, र यदि होइन भने, तपाइँ व्यक्तिगत रूपमा तपाइँसँग भएका सीपहरूको आधारमा खोजहरू गर्न सक्नुहुन्छ।
अर्कोतर्फ, घरमा कम्प्यूटर राख्ने सम्भावना नभएको जनसङ्ख्याको प्रतिशतलाई पनि ध्यानमा राख्नु आवश्यक छ। जसरी त्यहाँ मानिसहरू छन् जसले घरबाट सबै काम गर्ने सपना पाएका छन्, त्यहाँ एक जनसंख्या छ जुन चुनौती वा बरु एक दुःस्वप्न भएको छ। द UNICEF जारी गरिएको तथ्याङ्क जसमा बालबालिका र किशोरकिशोरीहरूको ठूलो प्रतिशतले उनीहरूको स्थान, आर्थिक अवस्था वा प्राविधिक साक्षरताको कमीको कारणले दूर शिक्षामा पहुँच गर्न सक्दैनन् भनी निर्दिष्ट गर्दछ।
सामाजिक असमानतामाथि हमला गरिनुपर्छ, वा “सामाजिक वर्गहरू” बीचको खाडल फराकिलो हुनसक्छ, जसले रोग, बेरोजगारी विरुद्ध लड्ने अरूको सम्भावना विरुद्धको जोखिमलाई प्रस्ट पार्छ। अर्को शब्दमा, चरम गरिबी एक पटक फेरि सरकारहरूको लागि आक्रमणको बिन्दु बन्न सक्छ।
केही देशहरूमा, 5G जस्ता प्रविधिहरूको विकास छिटो भयो, किनकि स्थिर वेब जडानको माग धेरै बढेको छ, जसबाट सबै प्रकारका गतिविधिहरू गर्न सकिने मोबाइल उपकरणहरूमा पहुँच हुनु आवश्यक छ। संवर्धित र भर्चुअल वास्तविकताले हालका वर्षहरूमा धेरै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र लिएको छ, कम्पनीहरूले यी प्रविधिहरू टाढाको कामको लागि प्रयोग गरेका छन् र परिमार्जनहरू कल्पना गर्न वा तिनीहरूको परियोजनाहरूको बारेमा निर्णयहरू गर्न सक्षम हुन।
कैदले नकारात्मक चीजहरू ल्याएको छ, तर सकारात्मक चीजहरू पनि। केही महिना अघि, युरोपेली अन्तरिक्ष एजेन्सी (ESA) र अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (IEA) ले बुलेटिनहरू जारी गर्‍यो कि कसरी बन्दीको पहिलो महिनामा हावाको तापमान उत्सर्जनसँगै घटेको छ C02.
यसले के सुझाव दिन्छ? सायद टेलिवर्किङले हामी आफैले वातावरणमा निम्त्याएको प्रकोपलाई कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ। - जसको मतलब यो होइन कि यसले वातावरणीय संकटलाई पूर्ण रूपमा शान्त पार्छ वा जलवायु परिवर्तनलाई रोक्छ। यदि हामी तार्किक रूपमा सोच्दछौं कि घरमा बस्नुको तथ्यलाई बिजुलीको ठूलो खपत चाहिन्छ भने, नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग अनिवार्य रूपमा स्थापित गरिनु पर्छ, सबै गतिविधिहरूको प्रतिरोध गर्न। तर, कतिपय देशले यसलाई अर्कै ढंगले लिएका छन्, महसुल बढाएर खानेपानी र बिजुली जस्ता सेवाको उपभोगमा कर लगाएर नागरिकका लागि अन्य प्रकारका समस्या (मानसिक स्वास्थ्य) सिर्जना गरेका छन् ।
स्वास्थ्य प्रणालीको उचित कार्यप्रणाली सर्वोपरि हुनुपर्छ, यो जीवनको संरक्षणको ग्यारेन्टी गर्ने अधिकार हो, र सामाजिक सुरक्षा गुणस्तरीय र सबैको पहुँचयोग्य हुनुपर्छ। र यो पक्कै पनि चुनौती हो। हामी धेरै स्पष्ट छौं कि सबै मानिसहरूले COVID 19 वा अन्य दीर्घकालीन रोगहरूको उपचार गर्न सक्दैनन्, वा घरमा डाक्टरको लागि भुक्तानी गर्न सक्ने क्रय शक्ति छैन, निजी क्लिनिकमा खर्चको लागि धेरै कम भुक्तानी।
प्रतिबन्धको यस समयमा प्रकाशमा आएको केहि भनेको मानसिक स्वास्थ्य स्तरमा महामारीको अन्य परिणामहरू हुन्। धेरैले पीडा भोगेका छन् र भोगिरहेका छन् डिप्रेसन र चिन्ता PAHO-WHO डाटा अनुसार। बन्दी (शारीरिक सम्पर्कको कमी, सामाजिक सम्बन्ध), जागिर गुमाउनु, व्यवसाय/कम्पनी बन्द हुनु, परिवारका सदस्यको मृत्यु, सम्बन्ध टुट्नु आदिसँग सम्बन्धित। घरेलु हिंसाका धेरै घटनाहरू प्रकाशमा आएका छन्, पारिवारिक द्वन्द्वको अवस्थाहरू मनोवैज्ञानिक विकारबाट पीडित हुन वा मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू पहिचान गर्न चेतावनी हुन सक्छ।
चिन्तन गर्न केहि प्रश्नहरू, के हामीले साँच्चै पाठ सिकेका छौं? के हामी प्राविधिक चुनौतीहरूको सामना गर्न तयार छौं? हामी सबैसँग समान अवसर हुने सम्भावना के छ? के हामी अर्को महामारीको लागि तयार छौं? आफैले जवाफ दिनुहोस् र यी परिस्थितिहरूलाई कसरी नकारात्मकबाट सकारात्मकमा परिवर्तन गर्ने भनेर सिक्न जारी राखौं, त्यहाँ प्राविधिक र सामाजिक स्तरमा शोषण गर्ने ठूलो सम्भावना छ र हामीले कल्पना पनि नगर्ने सीपहरू पत्ता लगाएका छौं, यो हुन अर्को एक कदम हो। राम्रो।